Maalinteyda (xuska) ee kubbadda Cagta
Admin Falanqaynta aasaasiga ah ee suuqa Forex Siideynta xogta muhiimka ah sida kobaca GDP iyo akhrinta shaqada ayaa loo qorsheeyay sidoo kale, laakiin maalgashadayaasha ayaa laga yaabaa inay aad ugu mashquulaan sheekada Brexit si ay uga falceliyaan tirooyinka.
Iyadoo Theresa May ay aad ugu riixayso in ay ka dhaadhiciso sharci-dajiyayaasha in heshiiska lagu heshiiyey Midowga Yurub uu yahay natiijada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee la gaaro 20 bilood oo wadahadal ah ka dib, sawirka dhaqaale maaha mid u wanaagsan sida UK ay rabto ka hor inta aysan ka bixin Midowga Yurub bisha Maarso.
Xogta kobaca GDP ee Isniinta ee bisha Oktoobar waxay u badan tahay inay xaqiijiso taas; Falanqeeyayaasha ayaa saadaaliyay kororka 0. Dhanka kale, warshadaha wax soo saarka ayaa sidoo kale wajahaya dabaylo xoog leh iyadoo ganacsiyadu ay u muuqdaan inay aad uga walaacsan yihiin inay maalgashadaan mashaariicda cusub ee la siiyay hubin la'aanta ku xeeran Brexit, iyagoo u horseedaya PMI-ga ku habboon tan ugu hooseeya tan iyo Ogosto bishii Oktoobar. Isniinta, xafiiska Tirakoobka Qaranka ayaa la saadaalinayaa inuu sheego in wax soo saarka wax soo saarka uu kordhay 0.
Iyadoo falanqeeyayaasha ay qiyaasayaan in warbixinta shaqada ee bisha Oktoobar aysan ka duwanaan doonin siideynta hore, iyada oo celceliska dakhliga marka laga reebo gunooyinka saadaasha si ay u koraan xawli joogto ah 3. Calaamaduhu waa in macaamiishu aysan awoodi doonin inay bixiyaan gacan waxtar leh si kor loogu qaado koritaanka. Intaa ka dib, haddii kharashka qoysku uu hoos u dhaco, sicir-bararka ayaa laga yaabaa inuu sii lumiyo uumiga bilaha soo socda, oo sida muuqata ku qasbaya Baanka England inuu dib u dhigo sicir kasta.
Laakiin maadaama waxqabadka mustaqbalka ee UK ee dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ay ku xidhan yihiin sida Brexit u dhici doono, pound-ka lama filayo inuu wax badan ka qabto xogta toddobaadka soo socda wakhtigan. Diidmada sharciga ka noqoshada Baarlamaanka Talaadadii oo ay ku xigto cinwaannada sheegaya in sharci-dajiyayaashu ay dejinayaan codka kalsoonida ee May waxay si weyn u miisaamayaan FX iyo suuqyada saamiyada. Dhanka kale, xaaladda caanka ah ee aan caanka ahayn ee qorshuhu uu helo oggolaansho, maalgashadayaasha waxay kordhin karaan meelaynta wax iibsiga.
Ogsoonow in Midowga Yurub uu horey uga digay in aysan jirin doorasho kale oo la soo bandhigo oo aan ahayn tii lagu heshiiyey Ra'iisul Wasaaraha Britain, iyadoo Madaxweynaha Golaha Yurub, Donald Tusk, uu sheegay intii lagu jiray shirkii G20 in diidmada ay joojin karto Brexit ama keeni karto bixitaan iyada oo aan jirin.
Hoosta, lammaanuhu waxay sii wadi karaan luminta ilaa ay ka gaaraan 1. Beddelka, codka Brexit ee togan wuxuu kaxayn karaa lammaanaha ka sarreeya calaamadda 1. Kordhinta steeper waxay sidoo kale caqabad ku noqon kartaa 1. Post navigation.
Maxay kala kulantay Raaqiya Manaal? Part 3 Hadaba maxay kala kulantay Raaqiya Manaal? Waa aduunyo qofba cayn u tumaya hore ayaa loo dhahay laba kala bariday kala war la. Waxaa afka Osmaan diicay ka soo booday abaayo manaal aad baad u mahadsantahay walaaley abaalkaaga waxaan ku godo ma aqaan Waxa uuna ku sii daray goorma ayaan kaa soo war doonaa baayo waxay ugu jawaabtay aboowe khamiista iga soo wardoona.
Hadaba muxay noqotay jawaabtii uu helay? Part 4 Ileen kala gaceel xasuus buu kugu dilaa , ileen kaftan kaabu kaa jaraa ileen kaskaabuu ku hoos marshaa , inuu yahay jaceel kan aniga i heley bal dadyahoow intaan kaydsanayay daya ……walax iga tan waynbaa qalbigeeyga gubayoo ,iga jaray jidiinki oon ka seexan waayoo walwal igu abuuro alloow sahal amuuraha Rabanaa yasahal ,,,,,,,,,, Wuxuu osmaan diiceey u soo luuday dhankaa magalada isagoo qalbigisa ay ka dhex guuxayso wuxuu kala kala kulmi doono manaal oo oo uu ka sugaayay jawaab.
Waxay talo sii gurguurtaba waxaa iska yimid wakhtigii uu sugayaay waxaan ku hor maray masaajidka wuxuu iska soo bixiyaay salaadii maqarib kadib kabaha ayuu gashaday wuxuuna isku sii daayay gurigii ay ku nooleed manaal siday tahay ramadaan oo uu afur u ordaayo , Osmaan diiceey wuxuu soo istaagay gurigii uu balanta ku lahaa ee ay ku nooleed Manaal, Osmaan markuu albaabka garaacay wadnahiisa waxuu u garaacmaayay sidii qof ka qayb galaayay Oradada ama maaradoonka oo miter, waa qof jiran ileyne jacayl waa cudur dhuuxiyo lafaha gala dhagar qabana weeyaan , waxaa guriga ka furtay gabadh yar oo uu san aqoon wuxuna waydiiyaay Manaal gabadhii ayaa ugu jawaabtay Manaal suuqa ayaay u yara baxday Wuxuu sii waydiiyaay Goorma ayay soo noqanaysaa , 2 saac kadib ayaa laga yabaaq inay soo noqoto ayaa loogu jawaabay.
Muxuuse lakulmay osmaan diicey? Allaahu Aclam Bimuraad.
Isniinta, xafiiska Tirakoobka Qaranka ayaa la saadaalinayaa inuu sheego in wax soo saarka wax soo saarka uu kordhay 0.
Iyadoo falanqeeyayaasha ay qiyaasayaan in warbixinta shaqada ee bisha Oktoobar aysan ka duwanaan doonin siideynta hore, iyada oo celceliska dakhliga marka laga reebo gunooyinka saadaasha si ay u koraan xawli joogto ah 3. Calaamaduhu waa in macaamiishu aysan awoodi doonin inay bixiyaan gacan waxtar leh si kor loogu qaado koritaanka.
Intaa ka dib, haddii kharashka qoysku uu hoos u dhaco, sicir-bararka ayaa laga yaabaa inuu sii lumiyo uumiga bilaha soo socda, oo sida muuqata ku qasbaya Baanka England inuu dib u dhigo sicir kasta. Laakiin maadaama waxqabadka mustaqbalka ee UK ee dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ay ku xidhan yihiin sida Brexit u dhici doono, pound-ka lama filayo inuu wax badan ka qabto xogta toddobaadka soo socda wakhtigan. Jacaylku wuxuu noqon karaa mid xanuun badan.
Xusuustu waa mid naxariis daran. Mararka qaar waxaan isweydiiyaa jacaylku ma mudan yahay in loo dagaallamo, laakiin markaa waxaan xusuustaa wejigaaga oo dagaal ayaan diyaar u ahay. Markaan indhaha xidho, waan ku arkaa. Markaan indhaha kala qaado, waan ku arkaa. Daqiiqad ma dhaafi karto adiga oo aan kaa fekerin. Waan ku jeclahay in ka badan inta ereydu qeexi karaan, dareenku wuu cabirayaa fikirkuna wuu qiyaasi karaa. I tus habeen wanaagsan, waxaana kuu sheegayaa maalin si wanaagsan ku dhammaatay.
Waxaad had iyo jeer ka dhigeysaa maalintayda. Habeen wanaagsan farxaddayda. Jaceylka aan kuu qabo waa sii kordhayaa ilbidhiqsi kasta. Subaxdii, galabtii, ama habeenkii, jacaylka aan kuu qabo waligiis waa mid super, xusuusin ah! Maalin weyn ka hor farxaddayda. Waan kuu xiisay tillaabo kasta oo aan qaado iyo dhaq-dhaqaaq kasta oo aan sameeyo.
Aad baan kuugu xiisay waxaanan jeclaan lahaa inaad fahanto. Wax fikrad ah kama lihid xaddiga farxadda aad noloshayda u soo qaadatay. Weli waxaad tahay bisad yar oo indhahayga eegaysa, jacayl doonaysa adduunyadan qabow. Waxaan joojiyaa werwerka aan ka qabo berrito markii aan arkay sida ay u fiicnayd shalayto iyo sida sharafta leh ee maanta ay kula muuqato.
Waa jacaylkaaga oo dhan! Waxaad tahay cawskayga markay qorraxdu ifto, Xiddigahayga habeennimo markii gudcurku dhawaaqo. Waad hubtaa inaan wada ahay dhammaantiis. Habeen wanaagsan my love. Hadaad ku dhiiratid, gacanta i qabso oo ii qaado meesha qalbigaagu yaal.
Waxaan rabaa inaan dareemo waxa ay u egtahay inaad jeclaato qof adiga oo kale ah. Wax kasta oo aad qabato waa ii farxad. Marnaba ma murugoon karo mar kasta oo aan agagaarkaaga joogo. Waxaan fadhiyaa halkan maalintii oo dhan anigoo sugaya daqiiqada aan arki doono wajigaaga, waxaana laga yaabaa inaan helo laabta. Aad ayaan uga xumahay in dhammaantood ku dhammaadeen riyo maalmeed.
Wax ka xanuun badan majiraan adiga mooyee. Laakiin maxaan sameyn karaa? Waxaad horey u go'aansatay inaan loogu talagalin. Illoobiddu waa ku adag tahay. Kaliya markii aad u maleyneyso inaad fiicantahay, xusuus lama filaan ah ayaa xanuunka dib u soo celinaysa.
Markaan ku eego adiga, waxaan gartay intaad noloshayda qayb ka ahayd. Sida gaarka kuu ah iyo sida aad had iyo jeer ii farxad geliso. Waan ku jeclahay. Weligaa ha iga tagin, gacmahayga si adag u qabo. Adiga la'aantii noloshayda, wax walba waa macno la'aan. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan haysto qof kula mid ah, waxaad tahay hanti run ah. Waligey waan ku qiimeyn doonaa waana ku jeclaan doonaa ilaa dhamaadka waqtiga. Gacaliye, waxaan kuu balanqaadayaa inaan ku jeclaado oo aan ku qiimeeyo intaan noolahay, maxaa yeelay aad baan kuu jeclahay.
Riyadayda ayaad run ka dhigaysaa. Waxaad tahay riyadeyda. Waxaan kaa jeclahay wax kasta oo adduunyada ah.
Waxaa afka Osmaan diicay ka soo booday abaayo manaal aad baad u mahadsantahay walaaley abaalkaaga waxaan ku godo ma aqaan Waxa uuna ku sii daray goorma ayaan kaa soo war doonaa baayo waxay ugu jawaabtay aboowe khamiista iga soo wardoona.
Hadaba muxay noqotay jawaabtii uu helay? Part 4 Ileen kala gaceel xasuus buu kugu dilaaileen kaftan kaabu kaa jaraa ileen kaskaabuu ku hoos marshaainuu yahay jaceel kan aniga i heley bal dadyahoow intaan kaydsanayay daya ……walax iga tan waynbaa qalbigeeyga gubayoo ,iga jaray jidiinki oon ka seexan waayoo walwal igu abuuro alloow sahal amuuraha Rabanaa yasahal ,,,,, Wuxuu osmaan diiceey u soo luuday dhankaa magalada isagoo qalbigisa ay ka dhex guuxayso wuxuu kala kala kulmi doono manaal oo oo uu ka sugaayay jawaab.
Posted in Earayo xasuus mudan
thoughts on “Earayo xasuus mudan”